Waakan Xiddiga Ay Barcelona U Dooratay Inuu U Bedelo Lionel Messi Haddii Uu Suuqa Xagaagan Iskaga Baxo Camp Nou - Gool24.Net
Waakan Xiddiga Ay Barcelona U Dooratay Inuu U Bedelo Lionel Messi Haddii Uu Suuqa Xagaagan Iskaga Baxo Camp Nou
Kooxda Barcelona ayaa u muuqata mid kasii diyaar garoobaysa bixitaanka kabtanka kooxdeeda ee Lionel Messi oo dhawaanahan xaaladiisa kooxdaasi cakiran tahay, Leo ayay jirtaa fursad uu ugu dambayn kaga dhaqaajin karo Camp Nou suuqa xagaagan.
Messi oo aan dhawaanahanba kalsooni badan ku qabin habka loo maamulo kooxdiisa ayay u raacday guuldarradii bahdilaada dhammayska tiran ahayd ee ay kala kulmeen Bayern Munich oo hal kulan 8-2 ugaga reebtay Champions League.
Warar dhawaan la helay ayaa sheegayay in Messi oo kulan la yeeshay tababaraha cusub ee kooxdiisa ee Ronald Koeman uu u sheegay in fursada uu kooxda kaga bixi karaa ay ka badan tahay mida uu kusii joogi karo.
Haddaba, iyadoo ay maalinba maalinta xigta sii xoogaysanayaan wararka sheegaya in 33 sano jirkaasi ka dhaqaajinayo Barcelona, maamulka sarre ayaa sii calaamadsaday ciyaaryahanka ay doonayaan inay bedel uga dhigtaan.
Sida ay sheegayaan wararka laga helayo Talyaaniga, ciyaaryahanka ay Barcelona u dooratay bedelka Messi ayaa ah Paulo Dybala oo ay Argentina kasoo wada jeedaan kana tirsan kooxda Juventus.
TuttoSport oo Talyaaniga kasoo baxa ayaa sheegaya in Messi iyo Dybala labadooda midna uusan ku faraxsanayn kooxaha ay joogaan taasina ay dhalin karto in labada kooxood ay ka wada hadlaan heshiis is-dhaafsi.
Dybala ayaan wali wax heshiis ah oo cusub kula heshiinin Juventus waxaana xusid mudan inuu qarka u fuulay inuu ku biiro midkood Man United iyo Tottenham suuqa sanadkii hore.
Dybala ayaa sanadihiisii hore ee Bianconeri ahaa mid joogto loola xidhiidhiyo Barcelona iyadoo markasta loo arkayay mid ciyaar ahaan u dhaw-dhaw Messi.